“Hooyadeey ayaa diiday inaan ku biiro AC Milan.”. – Gool FM
“Hooyadeey ayaa diiday inaan ku biiro AC Milan.”.
Byare August 31, 2016
(Italy) 31 Agoosto 2016. Geesiga kubada cagta Talyaaniga wuxuu u wareegsan lahaa San Siro markuu yaraa, hase yeeshee inuu halkaas u wareego waxaa ka hor yimid hooyadiis Fiorella hadana wuxuu fasal ciyaareedkii 25aad la qaadanayaa kooxdii yaraantiisa.
Francesco Totti ayaa shaaca ka qaaday in AC Milan ay isku dayday saxiixiisa markuu 13 jir ahaa balse hooyadiis ay diiday dhaqaaqaas.
Halyeyga reer Roma kaas oo hadda u dheelaya fasal ciyaareedkiisii 25 aad kooxda Giallorossi ayaa sidoo kale qirtay inuu qarka u fuulay inuu ka tago Stadio Olimpico kuna biro Real Madrid sanadkii 2004 balse laga dhaadhacshay inuu la sii joogo qoyskiisa iyo kooxda Serie A
Totti ayaa loo balan qaaday inuu noqdo kaaliyaha farsamada kooxda haduu dhamaado fasal ciyaareedka 2016/17 waxayna taas micneheedu tahay in waayihiisii kooxda ee soo bilawday 1989 ay soo gabagaboobaayaan.
Xirfad ciyaareedka Totti ayaa wado kale qaadi lahayd hadii aysan hooyadii Fiorella aysan ku adkaysan lahayn inuu Roma sii joogo.
“Markaan jiray 13, kooxo badan ayaa albaabka iisoo garaacay,” Totti ayaa saas u sheegay The Players’ Tribune
“Raggii ka socday AC Milan waxay I waydiisanaayeen inaan kubadooda ku soo biro. Waxay u muuqatay fursad wayn. Maxaan dooran lahaa?
“Hagaag, maysan ahayn go’aankeyga, dabcan. Hooyadey ayaa maamulka hayday. Walina way haydaa. Maysan rabin inaan ka tago guriga iyadoo ka baqaysa inay wax igu dhici kareen.
“Maya, maya, ayay ku tiri raggii matalayay kooxda. Intaas ayay gabi ahaanba ku tiri.
“Way adkeyd in maya lagu yiraah AC Milan. Waxay uga dhignaan lahayd qoyskeena lacag badan. Balse hooyadey waxay I bartay cashir maalintaas: Hoygaada ayaa ah sheyga ugu muhiimsan noloshaada.
“Maalmo yar kadib waxaa dhankeyga u soo dhaqaaqay Roma. Way isoo dalbatay. Waxaan xiranayay funaanada jaalaha iyo gaduudka ahayd.”
Kabtanka Roma ayaa ka soo muuqday ilaa maalintaa 600 oo kulan oo Serie A ah oo kooxdiisa u dheelay wuxuuna ku guuleystay Scudetto, labo Coppa Italia iyo labo jeer oo Supercoppa Italiana ah.
Totti ayaa sidoo kale sheegay inuu ka tagi rabay kooxda sanadii 2003/04, markii uu 20 gool u dhaliyay kooxdiisa oo kaalinta labaad ku dhameysatay sanadkaa.
“Waxaa jirtay mar laga joogo 12 sano oo aan ku fakaray inaan ka tago Roma una jiheysto Real Madrid,” 39 jirka ayaa sidaa sharaxay.
“Markii koox aad u guulo badan lagana yaabo inay tahay kooxda ugu tunka wayn dunida ay kaa codsato inaad ku soo biirto, waxaad bilaabaysaa inaad ka fakarto waxa nolosha meel kale kaa siin kara. Waxaan wada hadal la yeeshay madaxweynaha Roma taas ayaan farqiga keentay. Ugu dambeyntii, wada sheekeysigii aan la yeeshay qoyskeyga ayaa isoo xasuusiyay waxa nolosha ay tahay.”
“Hoygu waa waxkasta.”.
10-kii saxiix ee xagaagan loogu hadal haynta badnaa barta Twitter-ka
RASMI: Nice oo la wareegtay Baloteli